Bible Yɛ Nhoma Bɛn?
1, 2. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Bible yɛ akyɛde kɛse?
SƐ W’ANI nna na w’adamfo bi bɛkyɛ wo ade a, ɛyɛ a wote nka sɛn? Wode ahopere na ebegye. Ɛbɛyɛ wo dɛ sɛ w’adamfo no adwen wo ho, na wobɛda no ase paa.
2 Saa na Bible te; Onyankopɔn de akyɛ yɛn. Nsɛm a ɛwom no, yɛrennya no baabiara. Wo deɛ susuw ho hwɛ: Bible ma yehu sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ soro ne asase, na ɔno ara na ɔbɔɔ ɔbarima ne ɔbea a wodi kan no. Afei nso, ɛma yɛn afotu a yebetumi de adi yɛn haw ho dwuma. Yesua Bible nso a, ɛbɛma yɛahu nea Onyankopɔn bɛyɛ daakye ama yɛn asase yi ayɛ krabɛhwɛ. Anokwa, Bible yɛ akyɛde kɛse!
3. Sɛ wusua Bible a, dɛn na wubehu?
3 Sɛ wusua Bible a, wubehu sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ wobɛyɛ n’adamfo. Bere a woresua ne ho ade nyinaa na wo ne n’adamfofa mu reyɛ den.
4. Dɛn na ɛma w’ani gye Bible ho?
4 Wɔakyerɛ Bible no ase kɔ kasa bɛyɛ 2,600 mu, na wɔatintim mpempem pii. Sɛ yeyi wiase nnipa 10 si hɔ a, wɔn mu 9 wɔ Bible wɔ wɔn kasa mu. Nnipa ɔpepem baako ne akyi na nnawɔtwe biara wɔn nsa ka Bible. Yɛrentumi mfa nhoma biara ntoto Bible ho da!
5. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Bible no fi “Onyankopɔn honhom mu”?
5 Bible no fi “Onyankopɔn honhom mu.” (Kenkan 2 Timoteo 3:16.) Nanso ebinom bisa sɛ, ‘Sɛ nnipa na wɔkyerɛw Bible no a, ɛnde yɛbɛyɛ dɛn aka sɛ efi Onyankopɔn hɔ?’ Bible bua saa asɛm no. Ɛka sɛ: “Nea efi Onyankopɔn hɔ na nnipa kae sɛnea honhom kronkron kaa wɔn [anaa, ɛkyerɛɛ wɔn kwan].” (2 Petro 1:21) Akɔyɛ sɛ adwumawura bi aka akyerɛ ne kyerɛwfo sɛ ɔnkyerɛw krataa bi mma no. Sɛ owie a, yɛbɛka sɛ krataa no fi hena hɔ? Yɛrenka sɛ ɛyɛ ɔkyerɛwfo no dea, na mmom adwumawura no. Saa na Bible no te; Onyankopɔn na ɔmaa nnipa kyerɛwee. N’anom asɛm na ɛwom, na ɛnyɛ wɔn a wɔkyerɛwee no. Enti Bible yɛ “Onyankopɔn asɛm.”​—1 Tesalonikafo 2:13; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 2.
Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase no wɔ kasa bebree mu
MFOMSO BIARA NNI BIBLE NO HO
6, 7. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ Bible mu nsɛm nyinaa hyia?
6 Mfe 1,600 ne akyiri na wɔde kyerɛw Bible no. Akyerɛwfo no bi kyerɛw wɔn de wu kɔe ansa na ebinom nso reba. Ná wɔn mu bi nim nhoma paa na na ebinom nso nhomanim nkɔ akyiri. Ná wɔn mu baako yɛ dɔkota, na ebi nso kɔ po. Wɔn a aka no nso, na ebi yɛ akuafo, nguanhwɛfo, adiyifo, atemmufo, ne ahemfo. Bible akyerɛwfo no gu ahorow, nanso nsɛm a wɔkyerɛwee no nyinaa hyia. Ɛnka asɛm bi wɔ ha nkɔka foforo wɔ baabi. *
7 Bible no mfiase pɛɛ no, yehu nea ɛkɔfaa adesamma haw nyinaa bae. Ɛrekɔ awiei nso, ɛkyerɛ sɛnea Onyankopɔn beyi ɔhaw nyinaa afi hɔ ama asase adan Paradise. Bible ma yehu nea akɔ so wɔ nnipa asetenam mfe mpempem pii, na ɛsan ma yehu sɛ Onyankopɔn apɛde nyinaa yɛ hɔ.
8. Ma nhwɛso a ɛkyerɛ sɛ abɔde ho asɛm biara a Bible aka no da ne kwan mu.
8 Wɔankyerɛw Bible no sɛ yɛmfa nsua abɔde ho ade anaa yɛmfa nkyerɛ ade wɔ sukuu. Nanso sɛ Bible ka biribi fa abɔde ho a, wuhu sɛ ɛda ne kwan mu. Nhoma a efi Onyankopɔn hɔ deɛ, saa na ɛsɛ sɛ ɛyɛ. Wohwɛ Leviticus nhoma no sɛɛ a, wubehu sɛ Onyankopɔn maa Israelfo akwankyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa yare nsan wɔn yɔnko. Ɛnyɛ nnɛ na wɔkyerɛw saa nsɛm no; akyiri yi koraa ansa na nnipa behui sɛ mmoawammoawa tumi de yare ba. Bible san ka sɛ asase sɛn baabi a hwee nni. Eyi nso yɛ nokware. (Hiob 26:7) Bere bi, na nnipa pii gye di sɛ asase yɛ tratra, nanso na Bible aka no dedaadaw sɛ ɛyɛ kurukuruwa.​—Yesaia 40:22.
9. Yɛhwɛ sɛnea Bible akyerɛwfo kaa nokware no a, dɛn na ɛma yehu?
9 Sɛ ɛba abakɔsɛm nso a, Bible ka no pɛpɛɛpɛ. Nanso abakɔsɛm nhoma pii nte saa; sɛ akyerɛwfo no reka asɛm bi a, wɔntaa nka mu nokware nyinaa. Yɛmfa no sɛ wɔn man akɔ ako adi nkogu. Sɛ wɔrekyerɛw wɔn abakɔsɛm a, wɔmmɔ so. Nanso Bible akyerɛwfo deɛ, nkogu a Israelfo dii mpo, wɔkaa ho asɛm, na wɔn ankasa mfomso nso wɔkyerɛwee. Obi te sɛ Mose sɛɛ, odii mfomso kɛse maa Onyankopɔn twee n’aso, nanso wamfa ansie; ɔkaa ho asɛm wɔ Numeri nhoma no mu. (Numeri 20:2-12) Nokware a Bible akyerɛwfo kae no ma yehu sɛ Bible no fi Onyankopɔn hɔ. Enti yebetumi de yɛn ho ato so.
AFOTU PA BEBREE WƆ BIBLE MU
10. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde Bible afotu yɛ adwuma nnɛ?
10 Bible no “fi Onyankopɔn honhom mu, na eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nneɛma ateɛteɛ.” (2 Timoteo 3:16) Ɛnnɛ, mfaso wɔ so paa sɛ yɛde Bible afotu bɛyɛ adwuma. Yehowa na ɔbɔɔ yɛn, enti onim yɛn ho biribiara. Onim yɛn sen sɛnea yenim yɛn ho mpo, na ɔpɛ sɛ yɛn ani gye. Onim nea ɛbɛboa yɛn ne nea ɛremmoa yɛn.
11, 12. (a) Afotu pa bɛn na Yesu de mae wɔ Mateo ti 5 kosi 7? (b) Dɛn bio na yebetumi asua afi Bible mu?
11 Yɛkenkan Mateo ti 5 kosi 7 a, yebehu afotu pa bi a Yesu de mae. Ɔkyerɛɛ nea yɛyɛ a yebenya anigye, sɛnea yɛne afoforo bɛtena kama, sɛnea yɛbɛbɔ mpae, ne adwene a ɛsɛ sɛ yenya wɔ sika ho. Ɔde afotu yi mae no, mfe 2,000 ni. Nanso nnɛ nyinaa wode yɛ adwuma a, ɛyɛ yiye.
12 Afei, Yehowa de Bible nnyinasosɛm kyerɛ yɛn ɔkwampa a yɛbɛfa so ama anigye aba yɛn abusua mu. Ɔsan kyerɛ yɛn kwan a yebetumi afa so ayɛ adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw, ne sɛnea yɛne nkurɔfo bɛtena na ama asomdwoe aba yɛn ntam. Sɛ́ yefi he oo, yɛte sɛn oo, yɛn haw so sɛ dɛn mpo a, Bible nnyinasosɛm betumi aboa yɛn.​—Kenkan Yesaia 48:17; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 3.
NYA AWERƐHYEM SƐ BIBLE NKƆMHYƐ BƐBA MU
Yesaia hyɛɛ nkɔm sɛ Babilon bɛsɛe
13. Dɛn na Yesaia kae sɛ ɛbɛto Babilon kurow no?
13 Bible nkɔmhyɛ pii abam dedaw. Baako ni: Yesaia hyɛɛ nkɔm sɛ Babilon bɛsɛe. (Yesaia 13:19) Ɔkyerɛɛ ɔkwan pɔtee a kurow no bɛfa so asɛe. Ná nsu atwa Babilon kurow no ho ahyia, na na apon akɛse da ano. Nanso Yesaia kae sɛ nsu no bɛwe na kurow no apon no nso, wobebue ato hɔ. Atamfo bedi kurow no so nkonim nanso wɔrentow agyan baako mpo. Yesaia kae mpo sɛ onipa a ɔbɛsɛe Babilon kurow no din de Kores.​—Kenkan Yesaia 44:27–45:2; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 4.
14, 15. Ɛyɛɛ dɛn na Yesaia nkɔmhyɛ no baa mu?
14 Yesaia hyɛɛ nkɔm no, mfe ahanu akyi na asraafo betwaa Babilon kurow ho hyiae sɛ wɔbɛsɛe no. Hena na na odi asraafo no anim? Sɛnea Yesaia kae no, na ɛyɛ Persia hene Kores. Enti afei de na biribiara kyerɛ sɛ nkɔmhyɛ no fã a aka no nso bɛba mu.
15 Anadwo a atamfo baa kurow no so no, na Babilonfo atow pon regye wɔn ani. Kurow no afasu akɛse ne nsu a atwa ho ahyia nti, na ɛyɛ wɔn sɛ wɔwɔ ahobammɔ. Kores ne n’asraafo no twaa bonka de danee nsu no ani. Nsu no we koduu baabi a Persia asraafo no fa mu a, ɛyɛ yiye. Nanso Babilon ɔfasu no na esi wɔn anim yi, wɔbɛyɛ dɛn awura kurow no mu? Sɛnea nkɔmhyɛ no kyerɛ no, na wɔagyaw kurow no apon ano ato hɔ dagyaa. Enti asraafo no dii kurow no so nkonim a wɔantow agyan baako mpo.
16. (a) Dɛn na Yesaia kae sɛ ɛbɛto Babilon kurow no? (b) Dɛn na ɛma yehu sɛ Yesaia nkɔmhyɛ no baa mu?
16 Yesaia hyɛɛ Babilon kurow no ho nkɔm sɛ da bi bɛba a, obiara rentena mu bio. Ɔkyerɛw sɛ: “Obiara rentena mu da, na ɔrennya baabi ntena, awo ntoatoaso a edidi so nyinaa mu.” (Yesaia 13:20) Asɛm yi sii anaa? Sɛ wokɔ Baghdad, Iraq anafo fam bɛyɛ kilomita 80 a, wubehu Babilon kurow dedaw no sɛ asɛe pasaa. Ebesi nnɛ, obiara nte hɔ. Yehowa ‘de ɔsɛe prae apra no kɔ.’—Yesaia 14:22, 23. *
Babilon a asɛe pasaa
17. Dɛn na ɛma yegye di sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa bɛba mu?
17 Yɛhwɛ sɛnea Bible nkɔmhyɛ pii aba mu no a, ɛma yenya ahotoso sɛ nea Bible aka sɛ ɛbɛba daakye nyinaa bɛba. Yehowa aka sɛ ɔbɛdan asase yi Paradise, na yegye di paa sɛ ɔbɛyɛ nso. (Kenkan Numeri 23:19.) Enti “daa nkwa a Onyankopɔn a ontumi nni atoro no ahyɛ ho bɔ fi teteete” no, yɛn ani da so.​—Tito 1:2. *
BIBLE BETUMI ASESA W’ABRABƆ
18. Dɛn na Paulo ka faa “Onyankopɔn asɛm” ho?
18 Yɛahu dedaw sɛ nhoma biara ne Bible nsɛ. Emu nsɛm nyinaa hyia, na sɛ ɛka abakɔsɛm ne abɔde ho asɛm nso a, wuhu sɛ ɛda ne kwan mu. Ɛma yɛn afotu pa, na emu nkɔmhyɛ pii nso abam dedaw. Ɛnyɛ eyi nko na Bible ka ho asɛm. Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: “Onyankopɔn asɛm wɔ nkwa, na tumi wɔ mu.” Dɛn na saa asɛm no kyerɛ?​—Kenkan Hebrifo 4:12.
19, 20. (a) Wopɛ sɛ wuhu sɛnea wote paa a, Bible bɛboa wo sɛn? (b) Dɛn na wobɛyɛ de akyerɛ sɛ w’ani sɔ Bible no?
19 Bible betumi asesa w’abrabɔ. Ebetumi aboa ma woahu sɛnea wote ankasa. Sɛnea yɛte paa wɔ yɛn mu no, Bible betumi aboa ama yɛahu. Ebia na ɛyɛ yɛn sɛ yɛdɔ Onyankopɔn. Nanso sɛ yɛdɔ no paa a, nea Bible aka no, yɛde bɛyɛ adwuma.
20 Bible yɛ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ ampa. Ɔpɛ sɛ woso mu yiye, wokenkan, na wusua. Ma w’ani nsɔ akyɛde a Onyankopɔn de ama wo yi, na sua daa. Woyɛ saa a, wubehu nea Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama nnipa. Yebesua ho ade pii wɔ ti a edi hɔ no mu.
^ nky. 6 Nnipa bi ka sɛ Bible mu nsɛm nhyia, nanso ɛnyɛ saa na asɛm no te. Hwɛ Yehowa Adansefo nhoma a wɔato din The Bible—God’s Word or Man’s? ti 7.
^ nky. 16 Sɛ wopɛ sɛ wuhu Bible nkɔmhyɛ pii a, wubetumi akenkan bi wɔ nhomawa a wɔato din Amansan Nhoma kratafa 27-29. Ɛyɛ Yehowa Adansefo nhoma.
^ nky. 17 Babilon sɛe no, ɛyɛ Bible nkɔmhyɛ pii a aba mu no mu baako pɛ. Wubehu nkɔmhyɛ pii a ɛfa Yesu Kristo ho wɔ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 5.
NOKWASƐM 1: BIBLE FI ONYANKOPƆN HƆ
“Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu.”​—2 Timoteo 3:16
Dɛn na ɛma Bible yɛ soronko?
Wɔakyerɛ Bible ase kɔ kasa bɛyɛ 2,600 mu, na wɔatintim mpempem pii.
Nsɛm a ɛwom no, yɛrennya no baabiara.
1 Tesalonikafo 2:13
Onyankopɔn na ɔma wɔkyerɛw Bible no.
Onyankopɔn maa nnipa kyerɛw n’anom asɛm.
NOKWASƐM 2: BIBLE NKƆMHYƐ YƐ NOKWARE
‘Onyankopɔn ntumi nni atoro.’​—Tito 1:2
Adɛn nti na yebetumi de yɛn ho ato Bible so?
Bible kyerɛɛ ɔkwan a wɔbɛfa so asɛe Babilon mfe pii ansa na ɛreba mu.
Bible nkɔmhyɛ gu so ara reba mu.
Nea Bible aka sɛ ɛbɛba daakye nyinaa, yebetumi de yɛn ho ato so.
NOKWASƐM 3: WƆDE BIBLE AMA YƐN SƐ ƐMMOA YƐN
“Me Yehowa, mene wo Nyankopɔn, nea ɔkyerɛ wo ade a eye ma wo.”​—Yesaia 48:17
Dɛn na woasua afa Bible ho?
Bible ka biribi fa abɔde ho a wuhu sɛ ɛda ne kwan mu.
Bible akyerɛwfo no kaa nokware.
Yesu kyerɛɛ nea yɛyɛ a yebenya anigye. Afei nso ɔkyerɛɛ sɛnea yɛne afoforo bɛtena kama, sɛnea yɛbɛbɔ mpae, ne adwene a ɛsɛ sɛ yenya wɔ sika ho.
NOKWASƐM 4: BIBLE BETUMI ASESA W’ABRABƆ
“Onyankopɔn asɛm wɔ nkwa, na tumi wɔ mu.”​—Hebrifo 4:12
Dɛn na Onyankopɔn Asɛm betumi ayɛ ama wo?
Ebetumi ama woahu nea Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ.
Ebetumi aboa ma woahu sɛnea wote ankasa.
Ebetumi ama woahu nea Onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ.
Onyankopɔn pɛ sɛ wokenkan Bible, wusua, na woso mu yiye.
Yɛbɛyɛ dɛn atumi ahu paa sɛ yɛte nea Bible kyerɛkyerɛ no ase?